China 3D fefy tariby miendrika vy, fefy vy malaza ho fefy fiarovana ny toeram-ponenana ao amin'ny mpamokatra sy mpamatsy amerikana avaratra | Pro Fefy
PRO.Fence dia manamboatra sy mizara karazana fefy vy tariby mba hihaona amin'ny fampiharana maro. Ity fefy 3D curved weld harato ity dia natao ho an'ny fampiasana trano. Izy io dia vita amin'ny tariby vy ary ny savaivon'ny tariby dia hatramin'ny 5mm aorian'ny famonoana. Ny tariby dia miara-mihodina hamorona ny harato 75 × 150mm, mamorona sakana mafy sy mateza. Ny tontonana iray manontolo dia manodidina ny 2.4m ny haavony ary misy triangular 4 miolakolaka eo amboniny izay avo loatra toy ny rafitra fanaovana fefy amin'ny trano.
PRO.Fence dia manome ity fefy tariby mihosin-koditra 3D ity ao anaty vovoka electrostatic mifono izay toa milamina kokoa amin'ny endriny. Na afaka misafidy pataloha PVC ianao hitehirizana ny vidiny. Ity fefy tariby ity dia mampiasa tsato-kazo toradroa sy clamp hanangonana azy izay mora vita.
Fefy mety tsara ho an'ny trano fonenana izy io.
Harato: 150 × 50mm
Paositra: paositra efajoro
Fototra: sakana simenitra
Vita: vovoka elektrostatika mifono / PVC mifono (Brown, Mainty, fotsy sns)
1) Fiainana maharitra
Izy io dia vita amin'ny tariby vy avo lenta momba ny 5mm amin'ny savaivony ary ny firakotra vovoka electrostatic manodidina ny 120g / m2. Ny tariby matanjaka sy ny harafesina avo lenta dia miantoka ny androm-piainana maharitra.
2) Mivoria mora foana
Izy io dia misy tontonana mesh, lahatsoratra ary namboarina niaraka tamin'ny clamp. Ny rafitra tsotra dia hanampy amin'ny fametrahana mora eo amin'ny tranokala.
Ity fefy vy matanjaka ity dia mety hiteraka sakana azo antoka ho an'ny fanananao.
Item TSY: PRO-03 Fotoana fitarihana: 15-21 ANDRO Orginan'ny vokatra: CHINA
Teo aloha: M-fefy fefy vy mifono vy mifono vy ho an'ny zavamaniry an'ny masoandro
Manaraka: 358 Fiarovan'ny tariby avo lenta ho an'ny fampiharana fonja, fananganana tranokala fiarovana ny fananana